>U Win Tin – Poem
> ကျားရဲ ဦးဝင်းတင် နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ (အကျဉ်းထောင်တွင်း ရေးသားခဲ့သော ကဗျာ) နေပြင်းလျှင် ပြင်း နှင်းမှုန်လည်း မှုန် ဆွေ့ဆွေ့ခုန် အိုက်လိုအိုက် ခိုက်ခိုက်တုန် ချမ်းလိုချမ်း။ အခန်းကျဉ်းကျဉ်း အလင်းမဝင် လေမဝင် နေမမြင် လမမြင် လူမမြင် သူမမြင်မှာ ထိုင်လျှင်ထိုင် မထိုင်လျှင်ငေး။ အိပ်လျှင်အိပ် မအိပ်လျှင်တွေး။ သတင်းမေးဖို့ ဝေးရော သီချင်းကလေးမှ မဆိုရ။ စာဖတ်ဖို့ ဝေးရော ကဗျာလေးမှ မစပ်ရ။ တရားဟောဖို့ ဝေးရော စကားလေးမှ မပြောရ။ အဟောသိကံ သံသရာ ငါ့ကမ္ဘာ့ ပိစိကွေး အခန်းကျဉ်းကလေး ပတ်လျှောက်လိုက် သံတံခါးဝ ရပ်လိုက် တမတ်တပ်တပ် တနေကုန်။ မနေ့ကလည်း တနေကုန် ဒီနေ့လည်း တနေကုန်ပြန်...
>Win Pe Bag – 6
> ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၆ဒါရိုက်တာတယောက်၏ ရုပ်ရှင်ကြည့်နည်း ၀င်းဖေနိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီး ဦးသုခ၊ သဘာဝမင်းသားကြီး ဦးထွန်းဝေ၊ စာရေးဆရာကြီး ဦးသိန်းဖေမြင့်တို့နဲ့ ကျနော် ဆုံဆည်းခဲ့ရတာကလေးတွေကို ပဏာမတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးသုခနဲ့တွေ့တိုင်း ကျနော့်ကို အသိပညာလက်ဆောင်ကလေးတွေ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော် အနုပညာကျောင်းအုပ်လုပ်နေစဉ်က ဆရာကြီးနဲ့ တခါ ဆုံခွင့်ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆရာက “ချစ်မုန်းမာန်”ဇာတ်ကားကို ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ရိုက်ဖို့အတွက် ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံး ဇာတ်ကောင် နေရာမှာပါဖို့ သရုပ်ဆောင်သစ်တယောက် လိုအပ်နေလို့ အဲဒီစရိုက်မှာကလည်း ပတ္တလားတီးတတ်ဖို့ သီချင်းဆိုတတ်ဖို့ စတာတွေဖြစ်နေလို့ ကျနော့်ကို အကူအညီတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတုန်းက ဆရာကြီးက သူ ၀င်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြုံကြိုက်လို့ “Karakatua East of Java”ဆိုတဲ့ကားကို ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ကြိုက်လို့...
> အိုဘားမား နဲ့ အို … ဘားမားမိုင်မြစ်ကြီးနားနိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ လူမည်းဖခင်(ကင်ညာနိုင်ငံ – Kenya)နဲ့ လူဖြူမိခင် (အမေရိကန်၊ ကင်းဆတ်ပြည်နယ်- Kansas)တို့ နှစ်ဦးက မွေးဖွားလာတဲ့ ဘာရက်အိုဘားမား(Barack Obama) ဟာ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ နှစ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၄၄ ဦးမြောက် သမ္မတ ဖြစ်သွားပါပြီ။ အိုဘားမားဟာ ပြိုင်ဖက် ရီပတ်ဗလီကင်ပါတီက ဂျွန်မက်ကိန်း (John McCain)ကို မဲ အပြတ်သတ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးသော အာဖရိကန်အမေရိကန်လူမည်း သမ္မတ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ အမေရိကန်မှာသာမက ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးရှိ လူတွေ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ၊ ရေဒီယိုကနေ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲသတင်းကို နားထောင် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်းပဲ အလုပ်က...
> အိုဘားမား နိုင်ပြီဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားပြု ဘာရက်အိုဘားမားက မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားသည်။ အိုဘားမားသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဦးဆုံး အာဖရိကနွယ် သမ္မတ တဦးဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ရှေ့နှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် သမတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရမည်ဟု သိရသည်။ အိုဘားမားအနိုင်ရရှိသည့် သတင်းကြောင့် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေသူများ။ (photo: ဒီအောင်ခင်) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Artist Tin Win (Beik Thano) one man show
> မြန်မာပန်းချီဆရာ၏ တကိုယ်တော်ပွဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ (photo: lifestyle magazine 2007 dec) တင်ဝင်း(ဗိဿနိုး)၏ တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ ပန်းချီပြခန်းတွင် ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဦးတင်ဝင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ ဗိဿနိုးပန်းချီပြခန်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ မင်းဘူးမြို့ဇာတိဖြစ်သူ ဦးတင်ဝင်းသည် ပန်းချီပန်းပုကျောင်း(မန္တလေး)တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ၂ နှစ်အကြာ ၁၉၇၂ မှ စတင်၍ ပန်းချီပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းသာမက နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ၎င်း၏ လက်ရာများကို ပြသလျက်ရှိသည်။ Golden Triangle Art မှ တင်ဝင်း(ဗိဿနိုး)၏ လက်ရာများAmitmay မှ လက်ရာများ ရက် ၂၀ ကြာ ပြသမည့်...
>Cartoon Maung Yit – In Burma, Election are for every 20 years
> Cartoon Maung Yit – In Burma, Election are for every 20 yearsNovember 4th 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.
> လင်းယုန်တင်အောင် ဒို့ခေါင်းဆောင်မောင်စွမ်းရည်နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ မာန်ဟုန်ထန်ပြင်း၊ တိမ်တောင်ခွင်းမည့်ငှက်မင်းလင်းယုန်၊ ပျံတက်ပုံကိုပုံပြင်ဖွဲ့ကာ၊ ပြောချင်ပါခဲ့ညီမောင်ငဲ့။ ရဲမာန်ဝင့်ဝင့်၊ တောင်စုံဖွင့်ကာမြင့်မြင့်မြန်မြန်၊ မုန်တိုင်းဆန်အံ့လေးသံမြားသံ၊ တဆံမငဲ့သူပျံခဲ့ပုံ၊ ရဲမာန်ဟုန်လည်းရဲဂုဏ်မော်ကွန်း၊ လင်္ကာညွှန်းလို့လှမ်းချင်ပါခဲ့၊ ညီမောင်ငဲ့။ မမြင်ဖူးလည်း၊ မြင်ဖူးသူကပြောပြလိုက်ရင်၊ သင်မြင်သလိုသင် ကြည်ညိုလိမ့်။ မကြားဖူးလည်း၊ ကြားဖူးသူကပြောပြလိုက်ရင်၊ သင်ကြားသလိုသင် ကြည်ညိုလိမ့်။ ကြည်ညိုရင်းက၊ သင်အားကျ၍လောကတလွှားမတရားမှု၊ ဖိနှိပ်မှုကိုဟန့်တားလိုမှု၊ ဆီးဆို့မှုကိုမှောင်ချလိုမှု၊ ချုပ်ချယ်မှုကိုအန်တုစိန်ခေါ်၊ သင် ခေါင်းမော်အံ့၊ရဲဘော်ညီရွယ်၊ လင်းယုန်ငယ်သည်လင်းကျယ်ကောင်းကင်၊ တိုးခွဲဝင်အံ့၊ကျား “ခြသေ့င်္ဆိုး”၊ “ကြံ့သိုး” “ဖွတ်” မြွေရေပုတ် မိကျောင်း၊ သစ်ခေါင်းပင့်ကူဆိပ်ခိုးအူသော၊ ပဒူပရွက်မျက်စိစူးလျှင်၊ မြင်နိုင်ဝေးဝေးနှုတ်သီးသွေးသော်၊ သွေးတိုင်းချွန်ထက်သန်လျက်တောင်ပံ၊ သံမဏိလက်သည်းလျှပ်စီးထိုးသုတ်၊သံငုတ်ဆူးချုံ၊ မုန်တိုင်းပင်လယ်တောင်ကွယ်တောတွင်း၊ ရန်မှောင်မင်းကိုဖြိုခွင်းစေအံ့၊ လင်းစေအံ့။ အို – လင်းယုန်တို့အမှောင်မင်းကို၊ ဖောက်ထွင်းဖြိုခွဲ၊ ရဲစေလော့။အမှောင်မိုက်ကို၊ တိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်း၊ လင်းစေလော့။အမှောင်ထုကို၊ အန်တုနှိမ်နင်း၊...
>U Win Tin – Articles on Art Selection – 2
> အနောက်တိုင်း ပန်းချီပန်းပု ဦးဝင်းတင် နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ (ပြန်လည်ဆန်းသစ် ဆောင်းပါး) အနောက်တိုင်း ပန်းချီပန်းပုတို့၏ မြစ်ဖျားခံရာသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၆ဝဝဝ ကျော်က အီဂျစ်(ယခု အာရပ်သမတနိုင်ငံ)တွင် ထွန်းကားခဲ့သော ပန်းချီပန်းပုတို့ဖြစ်သည်။ ရှေးအီဂျစ် လူမျိုးတို့သည် နောင်တမလွန်ဘဝ ကို ယုံကြည်ကြ၏။ ဂူသင်ချိုင်းများ၌ မြှပ်နှံ သင်္ဂြိုဟ် ရာတွင်သေသူ၏ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းမြုပ်နှံသည်။ သေသူ၏ သက်ရှိဘဝက လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရုပ်သွင်သဏ္ဍာန်များကို ပန်းချီ ပန်းပုများဖြင့်ပြုစု၍ ထည့်သွင့်း မြှပ်နှံသည်။ ထိုခေတ်က ထွန်းကားခဲ့သော သင်းချိုင်း နံရံပန်းချီရေးနည်း၊ ပန်ုးပုရုပ်ထုနည်း တို့သည် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ နှောင်းယဉ်ကျေးမှုများဖြစ်သော ကရိ၊ ဂရိ၊ ရောမ နိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဂရိပန်းချီပန်းပုတို့သည်ခရစ်မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း...
> မဲတပြား နဲ့ အတွေးတစ ဇော်အောင် (၀ါရှင်တန်ဒီစီ) နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ တောထဲရောက်နေတာကြောင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် မဲပေးခွင့်ရခဲ့ရင်လည်း ပေးခဲ့တဲ့ မဲပြားက အနှစ် ၂၀ တိုင် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသေးမည်မဟုတ်လား။ တောတွင်း ငှက်ဖျားဒဏ် သေဘေးမှလွှတ်မြောက်၊ ရန်သူ့ကျည်မသင့်၊ တရားမ၀င်ဒုက္ခသည်ဘ၀က အလွတ်ရုန်း နောက်ဆုံး အနှစ် ၂၀ အကြာမှ ကျနော် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးခွင့် ရလို့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာရပါတယ်။ တိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေက အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်။ အမေရိကန်သမိုင်း စာမျက်နှာသစ် ရေးတင်ရမယ့် အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ အစောပိုင်းကာလမှာ...
> နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာသောအခါ လေထီးဦးအုန်းမောင် (ပြန်လည်ဆန်းသစ် အထူးဆောင်းပါး) နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ တပ်ဖွဲ့ ၁၃၆ (Force 136) ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ဖတပလ) နှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေ သောအဖွဲ့မှာ တပ်ဖွဲ့၁၃၆ (Force 136) ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်စက နာဇီဂျာမနီ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဥရောပမှနိုင်ငံများ တစ်နိုင်ငံပြီး တစ်နိုင်ငံ နာဇီဂျာမနီ၏ လက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားကြသည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် မဟာမိတ်နိုင်ငံများမရှိသလောက်ဖြစ်ကာ အထီးကျန် ဘဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ပင် ဗြိတိသျှ စစ်ကက်ဘိနက်အဖွဲ့သည် ဂျာမနီအား ရေတပ်ဖြင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လေတပ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဂျာမနီ သိမ်းပိုက်ထားသော နိုင်ငံများ၏ အုပ်ချုပ် ရေးပျက်ပြားအောင် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းဟူသော လက်နက်သုံးလက်ဖြင့် အနိုင်တိုက်နိုင်မည်ဟု...
Page 849 of 902«1...847848849850851...902»